Tenga Obeticholic Acid powder (459789-99-2) hplc≥98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Obeticholic Acid powder
SKU: 459789-99-2. Category: R & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kweObeticholic Acid powder (459789-99-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Obeticholic acid poda inoshandiswa kubata PBC kune vanhu vakuru uye dzimwe nguva inoshandiswa pamwe nemumwe mushonga unonzi ursodeoxycholic acid (UDCA). Primary biliary cholangitis (PBC) chirwere chisingaperi chine chiropa chinoparadza zvishoma nezvishoma ducts muropa.
Obeticholic Acid powder video
Obeticholic Acid powder Basic Characters
Name: Obeticholic Acid powder
Obeticholic Acid powder muAntineoplastic Agent use
Zita rechizvarwa: Obeticholic Acid powder (oh BET i KOE lik AS AS)
Zita Rekushandisa: Ocaliva
Obeticholic Acid powder Usage
Iyi mishonga inoshandiswa yoga kana kubatanidzwa kwechimwe chirwere cheropa (primary biliary cholangitis-PBC). Ichi chirwere chinononoka kuparadza bile ducts muropa. Apo bile ducts inokuvadza, zvinhu zvinokuvadza zvinogona kuvaka mu bile uye kusasa chiropa. Obeticholic Acid powder inoshanda nekuita kuti chiropa chako chisanyanya kunyanya, uye nekubatsira bile ichibuda muchiropa. Obeticholic Acid powder inogona kubatsira kuderera kuwedzera kwekutanga biliary cholangitis uye kuderedza zviratidzo zvakadai sokuneta, ganda rakashata, kurwadziwa mumimba, uye maziso akaoma uye muromo.
Ndeipi iyo miyo ye Obeticholic Acid powder
Kuita Mukuru weDose yeBiliary Cirrhosis
Nhamba yekutanga: 5 mg muromo kamwe kamwe pazuva
Maintenance dose: 5 mg muromo kamwe kamwe pazuva; kana kuderedzwa kwakakwana mu-alkaline phosphatase (ALP) uye / kana kuti zviyero bilirubin hazviwaniki pashure pemwedzi ye3, wedzerai kuyerwa kwa 10 mg muromo kamwe pazuva
Maximum dose: 10 mg / zuva
Zvishandiso: Kurapa kwekutanga biliary cholangitis:
-Sezvo monotherapy muvanhu vakuru vasingagoni kubvumira ursodeoxycholic acid (UDCA)
-Kubatanidzwa neUDCA kune vanhu vakuru vane kukwana kwakakwana kuUDCA
Hapana kugadziriswa kwakakurudzirwa.
Gira chiropa chisingaiti (Child Pugh Class A): Hapana kugadziriswa kwakakurudzirwa.
Zvichienzanisa nehutachivhiringidzi chechiropa chisingaiti (Child Pugh Chikamu B neC):
-Initial dose: 5 mg muromo kamwechete pavhiki
-Mangara yekuchengetedza: 5 mg muromo kamwechete pavhiki; kana kuderedzwa kwakakwana kweAlP uye / kana kubesa bilirubin hakuna kuwanikwa pashure pemwedzi ye3, wedzerai kuyerwa kwa 5 mg 2 nguva pavhiki (kana kupfuura mazuva 3 oga), uye pashure pa 10 mg 2 dzimwe nguva pavhiki (zvisingaiti mazuva 3 oga ) zvichienderana nemhinduro uye kushivirira
-Kuwandisa kwemuviri: 10 mg / zuva
-Vatano vanofanira kuongororwa nekuda kwekuitika kwehupenyu hwehutano hwakashata
-Izviitiko zvinogona kuenzanisirwa zvinofanira kuenzaniswa nezvinobatsira kune vanorwere vane nhoroondo yekliniki yakakosha yehutano hwehutano hwakashata.
Varwere vasina kukanganisa pruritus:
-Add an antihistamine kana bile acid binding resin
-Deredzai kuyerwa kweiyo 5 mg rimwe zuva rimwe nerimwe (varwere vasingateereri mazamu ezuva rimwe nerimwe e5 mg) kana 5 mg muromo kamwechete pazuva (varwere vasingateereri muwandu wezuva nezuva we10 mg)
-Kurumidza kumira kurapwa kusvika kumasvondo e2, wozotangazve pamushandi wepasi
-Cherechedza kuregera kune varwere vakaramba vachienderera mberi, vasingakanganisi pruritus.
Iyo Obeticholic Acid powder inoshanda sei
Obeticholic Acid powder inoshandiswa iri yoga kana inobatanidza ursodiol (Actigall, Urso) kuzobata bhiaryary cholangitis (PBC; chirwere chechiropa chinoparadza ducts, iyo inobvumira bile kugara muchiropa uye kukonzera kukanganisa) kuvanhu vasingagoni tora ursodiol kana kune vanhu vasina kumbobatwa kubudirira ne ursodiol chete. Obeticholic Acid powder iri mukirasi yemishonga inonzi farnesoid X receptor agonists. Inoshanda kuburikidza nekuderedza kushandiswa kwebibi muropa uye kuwedzerwa kubviswa kweB bile kubva pachiropa.
Usati watora Obeticholic Acid powder, taura chiremba wako kana mhizha kana iwe uri weergoriti; kana kana uine zvimwe zvirwere. Ichi chigadzirwa chinogona kunge chisingabatsiri zvinoshandiswa zvinogona kukonzera kugadzikana kwezvirwere kana zvimwe zvinetso. Taura nemunhu wako wemishonga kuti uwane mamwe mashoko.
Usati washandisa mishonga iyi, udza chiremba wako kana wemishonga nhoroondo yako yezvechiremba, kunyanya ye: bile duct blockage.
Usati wambovhiyiwa, udza chiremba wako kana mazino nezvezvinhu zvose zvaunoshandisa (kusanganisira mishonga yemishonga, mishonga isina kunyorwa, uye zvemishonga).
Panguva yekudzivirira, iyi mishonga inofanira kushandiswa chete kana inonyatsodikanwa. Kurukurai nezvengozi uye kubatsirana nachiremba wenyu.
Hazvizivikanwe kana iyi mishonga inopinda mumukaka wamazamu. Tsvaga chiremba wako usati wasvika-kudya.
Obeticholic Acid powder Marketing
IObeticholic Acid Pfumva Iine Mhinduro Dzakashata
Kuneta, muromo wemuromo / kumeso, kana kukurumidza / kuora mwoyo kunogona kuitika. Kana chimwe chezviitiko izvi chikaguma kana kuti chichiwedzera, taurira chiremba wako kana wemhizha nokukurumidza.
Yeuka kuti chiremba wako akarayira mishonga iyi nokuti iye akatonga kuti kubatsirwa kwako kune chikuru kune ngozi yemigumisiro. Vakawanda vanoshandisa mishonga iyi havana matambudziko makuru.
Kunyange zvazvo iyi mishonga inoshandiswa kuporesa bhaariary cholangitis (PBC), inogona kukonzera kuwedzera kwezviratidzo zvechiropa. Taurira chiremba wako pakarepo kana iwe une zviratidzo zvakadai sechitsva kana kuti chinowedzera kupisa ganda, kusuruvara / kurutsa kusingaregi, kurasikirwa nenzara, kurwadziwa kwepamuviri / mimba, yellowing maziso / ganda, rima murini, kurwadziwa kwemasumbu / majoka, kupfugama kwemakumbo / tsoka / mimba, kana pfungwa / mafungiro anofanana. Chiremba wako anogona kupa mamwe mishonga yakadai se bile acid-binding resins kana antihistamines, kana kuti kwega kwechinguva / gadzirisa mazamu ako emishonga kuti ubatsire kutarisa mamwe madhara. Taura nachiremba wako nezvengozi uye zvibatsiro zvekutora mishonga iyi.
Chiitiko chakakomba chinokonzerwa nemigumisiro kune ichi chinodhaka chisingawanzoitiki. Zvisinei, kuwana rubatsiro rwezvechiremba kururamisa kana iwe uchicherechedza zviratidzo zvehutachiona hwehutachiona hunoshandiswa, zvinosanganisira: kuputika, kuchenesa / kupfugama (kunyanya kwechiso / rurimi / huroti), chirwere chakakomba, kushungurudzika kufema.
Nzira yekutenga Obeticholic Acid powder kubva kuAASraw